जता पायो उतै नथुकौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २०, २०७६ अरुणा उप्रेती
काठमाडौँ — कोरोना भाइरसका कारणले हात मिलाउनेहरू नमस्ते गर्न र ठेलमेल गरेर लाइनमा बस्नेहरू केही दूरी राख्न थालेका छन् ।
कोरोनाका कारण घरमा बस्न बाध्य भएकाहरू घरमै आफैंले पकाउन पनि बाध्य छन् । ‘पत्रु’ खानाको सट्टा स्वस्थकर खाना खान थालेका छन् । बालबालिकालाई पनि प्याकेटको सट्टा स्वस्थ खाना दिन्छन् । हात फोहोर भएको वास्ता नगर्नेहरू अहिले बारम्बार साबुन पानीले हात धुन थालेका छन् । अर्थात् हाम्रो धेरै बानी कोरोनाले परिवर्तन गरिदिएको छ । आशा गरौं, यस्तो स्वस्थकर बानी पछिसम्म पनि रहिरहला । कोरोना संक्रमित व्यक्ति धेरै नै बिरामी पर्छन् । कोरोना भाइरस लागेपछि मरिहालिन्छ भन्ने मान्छेमा त्रास छ । कोरोना संक्रमित भएर अस्पतालको भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्छ कि ? मरी पो हालिन्छ कि भन्ने त्रासले नै यस्तो बानी विकसित भएछ ।
यस्तै परिवर्तन गर्नैपर्ने अर्को बानी हो– जथाभावी ख्याक्क गर्ने र थुक्ने । यस्तो लाग्छ, मानौं यो राष्ट्रिय चरित्र हो । ‘कोरोना’ को छलफलमा ‘खोक्दा’ रुमालले नाक, मुख छोप्नुपर्छ त भनियो तर कसैलाई पनि जथाभाबी थुक्नु, ख्याक्क र खुक्क गर्नु हुँदैन भनिएन । यो बानी असभ्य मात्र होइन, रोग सर्ने कारण पनि बन्न सक्छ । यो बानीका कारण कोरोना मात्र होइन, क्षयरोग पनि सर्न सक्छ । क्षयरोगले नेपालमा हरेक दिन २० जना मर्छन् । तर प्रायः मानिसहरूले यो तथ्यांकलाई खासै वास्ता गर्दैनन् । सामान्य निरोगी मानिसले जथाभाबी थुक्नु लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । सिंगापुरमा जाने नेपालीले त्यहाँको सडकमा ‘ख्याक्क’ थुक्दैन न त युरोप जाने विद्यार्थीले नै । तर नेपालमा त जसले जहाँ पनि थुकिरहन्छन् । मानौं यो ‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड’ मा लेखिन योग्य चरित्र हो । अरूको देशमा फोहोर गर्न डराउनेले नेपालमा किन फोहोर गर्ने होलान् ? यहाँको हावापानी नै फोहोर भएकाले वा देशमा क्रान्ति ल्याउँछु भनेर ठूलो स्वरले चिच्याउने नेताले कहिल्यै ‘सफाइ क्रान्ति’ का बारेमा नबोलेर पो हो कि ?
चार जना पुरुष वा युवाहरू चिया पसलको वरिपरि उभिएर चिया खाइरहेको दृश्य १० मिनेट हेरिरहनुभयो भने पक्कै पनि दुई–दुई मिनेटमा सबै जनाले एक–दुई पटक थुकी नै हाल्छन् । पान पसलअघि उभिएर पान खाइरहेको वा सुर्ती माडेका मान्छे देख्नुभयो भने पक्कै तिनका वरिपरि रातो थुक र सुर्ती पनि देख्नु हुनेछ ।
मधेसतिरको अफिसमा त प्रत्येक कुनाकुनामा थरीथरीका चित्रहरू बनाउँदै थुकिएको हुन्छ । त्यहाँ कसैले पनि यसरी थुक्नेविरुद्ध आवाज उठाउँदैन किनभने यो त त्यहाँको चरित्र नै हो । पान खाने मानिसले पान थुक्ने, चुइगम खानेले जताततै थुक्ने र सडकको छेउमा पानीपुरी खाएर मुख कुल्ला गर्दै पिच्च थुक्ने बेलामा कसैलाई पनि ‘मैले थुकेको थुक कसले सफा गर्छ होला ?’ भन्ने प्रश्न मनमा आउँदैन ।
पशुपतिको मन्दिरमा सालिक अगाडि एक व्यक्तिले खकार्दै थुके । मलाई रिस उठ्यो । ती व्यक्तिको अगाडि गएर ‘हेर्दा सुट लगाएर हिँड्ने अनि भगवान्को मन्दिर अगाडि आएर थुक्ने ? लाज लाग्दैन’ भनेर हकारें । मेरो चर्को स्वर सुनेर वरिपरिका बटुवा पनि जम्मा भए र के भयो भनेर सोध्न लागे । मैले पनि रिसाएर ती मानिसले थुकेको खकार देखाउँदै भने, ‘भगवान्को दर्शन गर्न जाने मानिसले मन्दिर अगाडि नै खकार थुक्ने हो ?’ यति भनेपछि ती व्यक्तिले रातो मुख लगाए । मैले कागजको टुक्रा उनलाई दिएर ‘त्यो थुक पुछ्नोस्’ भने । मन्दिर अगाडि थुकेको हुनाले सायद अन्य भत्तजनलाई पनि थुक्ने मानिसप्रति सहानुभूति थिएन क्यारे ।
अरू भक्तजनले ‘हो त नि । त्यसरी थुक्ने हो ?’ भनेर थुक्ने व्यक्तिलाई कराए अनि ती व्यक्तिले खकार पुछेर छेउको नालामा हाले ।
हामीमध्ये कतिले जथाभाबी थुक्नेलाई किन थुकेको भनेर सोध्ने साहस गर्छौं ? माइक्रो चालकलाई बाहिर नथुक भन्न सक्छौं र ? ४ वर्षअघि दसैंका बेला काठमाडौंबाट दोलखा जाँदाको ७ घण्टा (४२० मिनेट) समयमा बस चालकले झन्डै २०० पटक थुके । चालकले थुक्दा बाटोमा मोटरसाइकल चढेर गइरहेका कतिपय महिला र पुरुषको लुगामा थुक र खकार लागेको उनीहरूले थाहै पाएनन् । सायद अफिस वा घर पुगेपछि थाहा पाए कि । थाहा पाएपछि रिसाए होलान् तर गर्न पो के सकिन्थ्यो र ?
त्यसबेला मैले बस चालकलाई ‘कति थुकिरहेको, मान्छेको जीउमा परेको देखेनौ’ भन्छु भन्ने विचार गर्दै थिएँ, मसँगैको साथीले मेरो विचार बुझेर भनिन्, ‘तिमी चालकलाई केही नभन, रिस उठायो भने कतै लगेर बस ठोकाइदिन्छन्, त्यसैले थुकेको हेर्न मन छैन भने आँखा चिम्ल ।’ मैले साथीको कुरा सुनेर केही बोलिनँ । अहिले पनि माइक्रोबस वा ट्याम्पोमा चढ्दा चालकले थुकेको देखे पनि म केही बोल्न सक्दिनँ ।
हरेक देशका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय चरित्र हुन्छ । जस्तो जर्मनहरूको चरित्र कसैलाई समय दिएपछि ठीक समयमा पुग्नु हो । त्यस्तै इजरायलीहरूको चरित्र धेरै मिहिनेत गर्नु, फ्रेन्चहरूको चरित्र जीवनमा आनन्द लिनु हो । यस्तै नेपालीहरूको राष्ट्रिय चरित्र फोहोर गर्नु र थुक्नु हो भन्ने जस्तो लाग्दैन ? के कोरोनाविरुद्ध कदम चाल्दा ‘साबुनले हात धोउ र जता पायो उतै नथुकौं’ भन्ने नारा नेपालीले मान्लान् ? प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:५९
बिस्काः जात्रा औपचारिक पूजामै सीमित गरिने
भक्तपुर — मध्यपुर थिमीको बिस्काः जात्रा औपचारिक पूजामै सीमित हुने भएको छ ।विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न नगरपालिकाले यस वर्ष बिस्काः जात्राअन्तर्गत सिन्दुर जात्रा र बोडेको जिब्रो छेड्ने जात्रालाई औपचारिक पूजा गरेर सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको बैठकले वैशाख २ गते मनाइने प्रसिद्ध ३२ खटसहितको सिन्दुर जात्रा र बोडेको जिब्रो छेड्ने जात्रालगायतका जात्राहरूलाई औपचारिक पूजामा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जात्रामा हुने भिडभाडले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले औपचारिक पूजा मात्र गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । मध्यपुर थिमिमा बिस्काः जात्राको मुख्य आकर्षण सिन्दुरे जात्रा र सोही दिन मनाइने बोडेको जिब्रो छेड्ने जात्रा हो । जात्रामा हजारौंको उपस्थिति हुने गरेको छ ।
यसअघि, भक्तपुर नगरपालिकाले जिल्लाको मुख्य बिस्केट जात्रालाई औपचारिक पूजामै सिमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बिस्केट जात्रामा विश्वभैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तान्ने, ५५ हात लामो लिङ्गो उभ्याउने गरिन्छ ।
बिस्केटजात्रा भक्तपुरवासीको महत्वपूर्ण पर्व हो । प्रत्येक वर्ष चैत अन्तिम साता सुरु भई नयाा वर्षसागै वैशाख महिनाको पहिलो सातासम्म आठ रात नौ दिन चल्ने बिस्केट जात्रामा हजारौं व्यक्ति सहभागी हुन्छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:५०